Yintoni ekufuneka uyijongile ukuthenga umshicileli we-3D- Ikkaro
yokuqalisa >> Ukushicilelwa kwe-3D >> Yintoni ukujonga ukuthenga umshicileli we-3D
Yintoni enokwenziwa ngomshicileli we-3D?
Ngomshicileli we-3D sinokwenza iindidi ezahlukeneyo zamalungu, uninzi lweengcinga zethu kunye nomshicileli esimyalelayo. Ayizizo zonke ezivumela iziqwenga zobunzima obufanayo, ukugqitywa kokugqibela kunye nezinto ezisetyenziswayo. Into elula ngenkangeleko enjengokuba nemibala eyahlukileyo kwisiqwenga esinye yinto engenakufezekiseka ngokulula. Isikelwe umda nangoku kubashicileli abancinci. Ndijonge phambili kumhla xa kufuneka ndize ukulungisa eli nqaku ukususa la mabinzana.
Into ebonakala icacile yile Ukushicilelwa kwe-3D kulapha ukuhlala Kwaye ukuba, njengeminyaka eyadlulayo, iikhompyuter zokuqala zazingumbandela we "geeks" ezimbalwa kwaye ngoku zikuwo onke amakhaya, abashicileli be3D bathatha indlela efanayo. Kum yonke into ingumcimbi wokuphucula ujongano kunye nokwenza indalo ngokulula. Xa ndiyazi yonke into ilula kangangokuba nomakhulu angayisebenzisa, iya kuba xa sibabona nakweliphi na ikhaya elikufutshane nemicrowave ;-)
Ke bajolise kubani?
Kulungile odumileyo Abenzi, abantu abathanda ukwenza izixhobo, amalinge kunye nokuguqula izinto. Kananjalo nakwiinkampani ezinokwenza iprototyping ngokukhawuleza kwaye ngexabiso eliphantsi. Kwinkampani, elebhu, isikolo okanye iyunivesithi, Ithetha ukuba banokwenza iindawo zesiko kunye neeprototypes ngexesha lokurekhoda kunye neendleko, ngaphandle kokuxhomekeka kubantu besithathu. Uguquko lwenene. Kwaye ikwajolise kuzo zonke ezo nkampani zifuna ukuvelisa ezazo iindawo zokuthengisa.
Ngomshicileli unokwenza i-tripod yeselula yakho, okanye iseti yegiya yokwenza umatshini, i-hanger yegumbi okanye umda nje wedango ukuze umnyango ungavali. Unokwenza izinto zokudlala, kunye nezinto zekhaya, i-coaster, imbiza yeentyatyambo, njengoko ubona kwaye njengoko besitshilo, umda uchazwe nguwe.
Iindidi zabashicileli be3D
Zininzi izinto onokukhetha kuzo ukwahlula iiprinta, kodwa kulwazi esiza kulunika i-Ikkaro ihlala ihambelana nomenzi, umgculeli kunye nehlabathi le-DIY, ndingakhetha 2
Ukuba kunjalo Izixhobo zasimahla zeHardware okanye zoShishino. Ngeeprinta ezikwiprojekthi ye-Hardware ye-Hardware (i-OSHW) esinokuthi siyiguqule, siyilungiselele, kwaye sizame ukuphucula nokwabelana ngalo lonke olo lwazi, zihlala zibanabashicileli abafikelelekayo kwaye banezicwangciso, ulwazi kunye nazo zonke iinkcukacha esinazo. Siza kufunda ngenene ukuba basebenza njani kwaye singadlala nabo. Nangona kunjalo kunye nabashicileli beshishini esihlala sifumana umgangatho ophucukileyo wamalungu kodwa basikhonza kuphela ukuba siprinte iinxalenye. Injengayo nayiphi na enye imveliso ukuba siyazivula siphulukana newaranti.
Enye into yokuwahlulahlula iya kuba yindlela okanye itekhnoloji abayiprintayo.
I-FMD (iModeli yokuFakela iFused). Eyona nto ixhaphakileyo phakathi kwabenzi kunye nabafundayo abangena kwihlabathi le-3D. Beka izinto eziphathekayo kumacandelo okupapashwa kwesiqwenga.
SLA okanye stereolithography. Yaziwa ngokuba kukuzenzela okubonakalayo okanye ifotosolidification. Yinkqubo yokuvelisa nangokongeza ii-resin ezincinci kakhulu zentlaka enento eyenziwe yi-laser yelanga kwaye isiqwenga siyaphiliswa etankini ngokukhanya kwe-UV.
Zininzi iitekhnoloji, i-DMLS, i-SLS, i-polyjet, njl njl, kodwa zikude kwi-DIY kwaye le ntshayelelo yoshicilelo lwe-3D. Siza kugxila kwezona ziqhelekileyo kuyo yonke i-FMD.
Iimpawu eziphambili zeprinta ye-3D
Xa uyokuthenga iselfowuni okanye imoto uyazi ukuba zeziphi izinto ekufuneka uzijongile ukuze wazi ukuba zilungile okanye ziyayifanela into oyifunayo. Ewe, ezi zezimpawu eziphambili ezichaza umsebenzi womshicileli we-3D. Ngale nto uya kuba nakho ukubathelekisa kwaye akufuneki ujonge kwixabiso kuphela kwaye wazi ukuba umntu ngamnye angenza ntoni kunye nesibonelelo esinokukunika sona.
Indawo yokwakha. Nciphisa ubungakanani beqhekeza oza kulakha. Ngokomgaqo kokukhulu kuya kuba ngcono. Ukuba indawo yakho yokushicilela okanye ivolumu incinci, inokukunyanzela ukuba usebenze ngeeprototypes zesikali okanye ungabinakho ukuprinta indawo oyifunayo kuba inkulu kakhulu.
Abaxhasi Inani labakhupheli ngaphandle sisiqwenga solwazi esibalulekileyo, kuba ngesikhupheli sinokusebenzisa umbala omnye kuphela wentambo ngexesha. Ke ukuba ufuna iziqwenga zemibala emininzi, kuya kufuneka uye kumatshini onezinto ezingaphezulu kwesinye.
Isisombululo esithe nkqo Z. Ubungqongqo boluhlu oluprinta, lincinci, inkcazo enkulu esinokuyifumana kumaqhekeza. Ixabiso lesalathiso linokuba yi-100 µm (0,1 mm) nangona kukho oomatshini abanakho ukusebenza nge-16 µ.
XY isisombululo esithe tyaba. Ihlala ichazwa ngaphezulu nge-ppi nganye (inqaku nge-intshi, ngokungathi sisisombululo umzekelo somshicileli wesiko, linani lamanqaku esiza kuwabeka nge-intshi.
Izinto oshicilelayo. Kuxhomekeka kwi-extruder, isiseko kunye netekhnoloji kusetyenziswa umshicileli wethu. Ukuba sithetha ngetekhnoloji exhaphakileyo yabenzi kunye nabagculi, siya kwi-FDM. Ngale teknoloji siprinta ngezinto ezi-2, i-Pla kunye ne-ABS, i-PLA yitroploplastic ebolayo, eqheleke kakhulu xa kuyilwa iindawo zethu. I-ABS yiplastiki enjengeziqwenga ze-LEGO, kodwa umzekelo ukuprinta nge-ABS, sidinga isiseko apho iziqwenga zibekwe khona ukuba zishushu, ibhedi ebandayo ayisifanelanga njengePLA. Ukuba ufuna ukuprinta nezinye izinto, ezinjengepolyester, isinyithi okanye uhlobo oluthile lokutya njengetshokholethi, jonga ukuba umatshini wakho uvumela olu hlobo lokuprinta kwe3D okanye ukuba ungatshintsha naliphi na icandelo ukuze ulifumane.
Ubukhulu Filament. Ngaphandle kokuthatha isigqibo ekukhetheni umshicileli we-3D okanye enye, kodwa kufuneka ndithathele ingqalelo ubukhulu be-filament eza kusetyenziswa
Isantya sokuprinta. Ngokukhawuleza isantya sokuprinta ngokukhawuleza iinxalenye ziya kuprintwa. Ukuba siya kumda weprinta, iinxalenye ziya kuphulukana nomgangatho kunye nokuchaneka. Yinto ebalulekileyo, kuba ushicilelo lwe-3D iseyinkqubo ecothayo yokuvelisa, kwaye kunokuthatha iiyure ezininzi ukuprinta inxenye. Ilinganiswa nge-mm / sec, lo ngumlinganiso we-FMD kwaye amaxabiso anokuhamba phakathi kwe-20 kunye ne-80 mm / sec.
Ngaba ivuliwe izixhobo? Ufuna ntoni umshicileli wakho we-3D? Ungumenzi kwaye ufuna ukwenza iinxalenye, ungathanda ukukwazi ukuyilawula, ukuyiguqula kancinane, njl. Okanye endaweni yoko ufuna ukuyila nokuprinta iinxalenye ngomgangatho onokubakho ngaphandle kokukhathazeka malunga nezixhobo zekhompyutha.
Inkxaso. Ngaba unayo inkxaso yobugcisa? Yeyiphi ifomathi, ngeetikiti, ngencoko yomnxeba, njl. Iinkampani ezithengisa iiprinta zorhwebo zenza impembelelo enkulu kulo mbandela, kwaye kuya kufuneka uwenze kakhulu, kuba nokuba uyingcali enkulu, inokukunceda okanye iwukhawulezise umsebenzi wakho.
Ukunxibelelana Yindlela esimele ukubeka ngayo uyilo esele silwenzile okanye esilufumene kwiPC yethu kwiprinta. Ezona ndlela ziphambili yi-USB, i-SD encinci, ibluetooth, iWIFI, i-Ethernet. Njengabanye, ayisiyiyo isivumelwano kodwa iswekile ethe kratya imnandi. Zeziphi iinkqubo zokusebenza esinokusebenza nazo kwiiPC zethu?
Ukunyamezelana. Yintoni engafaniyo nesisombululo. Ukunyamezelana yimpazamo evumelekileyo kwimveliso, ithiyori kunye nobukhulu bokwenyani. Ixabiso elibaluleke kakhulu, ngokungaphezulu okanye ngaphezulu kwesisombululo. Kwiiprinta ze-DIY sinokuthetha malunga nokunyamezelana kwe-0,1 ukuya kwi-0,2 mm.
Ixabiso. Ewe, ixabiso lihlala liyenye yezona zinto ziphambili xa uthenga nantoni na. Okwangoku kwiiprinta ze-3D sihamba kumanqanaba ukusuka kwi- € 100 ukuya kwi- € 5.000 okanye kwi- € 10.000, ngaphezulu ngentla njengoko kuhlala kungekho mda, unokuhlala uthenga into ebhetele.
Ndilinde isifundo endisele ndisenza kwi Iiprinta eziphambili ze-3D esinokuzithenga, zombini izixhobo zasimahla kunye nezamashishini
Ukuba unomdla kubashicileli noshicilelo lwe3D, unokulandela iindaba eziphambili malunga noshicilelo lwe3D kwicandelo lethu elitsha.
izigaba Ukushicilelwa kwe-3D Iilebula Abashicileli be-3D Ukuhamba kwetikiti
Izimvo ezi-5 ku "Yintoni ekufuneka ujonge kuyo ukuthenga umshicileli we-3D"
EyeDwarha 7, 2014 ngexesha 5:44 pm
Inqaku lokwazisa elinomdla kakhulu !! Ukuba wenza uthelekiso kuya kuba kuhle ukubandakanya i-BQ Prusa i3 Hephestos. Kwiveki ephelileyo ndiyifumene kwaye nangona ndingenalo nofifi, unditsalela umnxeba ukuba ndiyithenge: P.
EyeDwarha 8, 2014 ngexesha 2:07 pm
Molo Toni, inyani kukuba iHephestos ijongeka intle kakhulu.
Yindaleko yeprusa i3 yeRepRap
UOsvaldo Julio Schiavoni
EyoKwindla 5, 2015 ngexesha 2:17 pm
Inqaku elinomdla kakhulu, inyani kukuba ndiyadonsa xa ndifunda ezi zinto. Kodwa ndingumhlala-phantsi waseArgentina, ke kuya kufuneka ndiyibone isenzeka. Andizange ndibone umshicileli we-3D.
Ngendlela, ndicinga ukuba kukho typo: apho ithi i-FMD kufuneka ithi FDM.
Enkosi ngokwabelana ngala manqaku.
NgoNovemba 3, 2015 nge-3: 38 pm
Ndithathe umhlala-phantsi, ndihlala eArgentina, ndine-3D, kwaye andazi ukuba ndenzeni ngayo, okwangoku (andiyithengisi, ndinomdla wokufumana abantu abanomdla wokuzama ngayo.
UVictor Adolfo Benetti
EyoMqungu 6, 2019 e 8:49 pm
Molo, unokwenza la maqhekeza alandelayo alandela ibhloko yemoto ukuyihlanganisa igqibelele kwaye ayenze ijike njengemoto yentsusa enamalungu ayo, enkosi kakhulu
1 Yintoni enokwenziwa ngomshicileli we-3D?
2 Iindidi zabashicileli be3D
3 Iimpawu eziphambili zeprinta ye-3D